Badhasaabka Saaxil oo Daboolka ka qaaday mashariic wershadayn ah oo Berbera laga bilaabayo | Berberanews.com
Home WARARKA Badhasaabka Saaxil oo Daboolka ka qaaday mashariic wershadayn ah oo Berbera laga...
Badhasaabka Saaxil oo Daboolka ka qaaday mashariic wershadayn ah oo Berbera laga bilaabayo
Berbera-(Berberanews)-Badhasaabka Gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax), ayaa daboolka ka qaaday mashaariic wershadayn iyo maalgelin ah oo sanadkan gudihiisa laga hirgelin doono Gobolka, gaar ahaan magaalada Berbera.
Badhasaabka Gobolka Saaxil oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Berbera, ka dib markii uu muddo bilk u dhawaad ah uu fasax ugu maqnaa dalka Maraykanka, ayaa mar uu caawa ka hadlay munaasibad soo dhawayn ah oo dadweynuhu ugu qabteen Hoolka Kulliyadda Culluumta Badda waxa uu sheegay inuu shacabka reer Berbera iyo guud ahaan bulshada reer Somaliland ugu bushaaraynayo mashaariic horumarinneed oo Saaxil laga hirgelinayo sanadka gudihiisa.
Waxaan farriin u dirayaa dadweynaha reer Saaxil iyo kuwa reer Somaliland meel kasta oo joogaan, Gobolkan Saaxil Waxa bilaabmaysa wershadii sibidhka, waxa magaalada laga bilaabayaa wershadayn, xidkasta oo danaynaysa inay maalgashato.
Waxa isweydiin leh reer Berbera diyaar ma u yihiin in magalaada la maalgashado? Waxa weeye, dardar cusub baanu gelaynaa dawladuna go’aan bay qaadatay, wershaddii sibidhku way bilaabmaysaa.Waxa bilaabmaysa dhuxul-dhagaxdii oo $13 Milyan oo dollar noqonaysa mid shaqo abuuris badan laga helo.”ayuu yidhi Badhsaaabku.
Badhasaabku waxa uu inta araaciyay oo yidhi, “Gobolka Saaxil waa isha dhaqaale ee ugu horraysa Somaliland ee wax laga soo saarayo, haday tahay wershadayn iyo haday tahay madcano laga qodayo intuba waxay bilaabmayaan sanadkan gudihiisa.”
Badhasaabka Saaxil waxa uu sheegay in waxqabadka ka hirgalay Gobolka ay u suurtagelisay daacadnimmo, waxaana hadalladiisa ka mid ahaa, “Gobolka wax badan baa noo qabsoomay, waxaasina waxa suurtageliyay wadatashi iyo wax-wada-qabad aanu daacacad ugu noqonay siyaasadda Madaxweynaha Somaliland, oo ah waxqabad iyo fulinta ballanqaadka.”
Munaasibadda soo dhawaynta ah ee loo sammeeyay Badhasaabka Saaxil oo ay goobjoog ka ahaayeen Maareeyaha Dekedda Berbera, Badhasaabb-ku-xigeenka, Guddoomiyaha Kastamka Berbera, isu-duwayaasha Gobolka, Cuqaal, haween iyo dhallinyaro tiro badan.
Xoghayaha Dawladda Hoos ee Degmada Berbera Cali Maxamed, ayaa sheegay in waxqabadka ay ku tallaabsadeen uu suurtageliyay wadashaqaynta madaxda kala duwan ee Gobolka iyo kuwa Degmada, islamarkaana laysku raacsanyahay in Berbera hormood u tahay waxqabadka Gobollada Somaliland oo dhan.
“$105 Mailyan oo maalgelin ah bay dawladda Ingiriisku innoogu deeqday, meesha koowaad ee wax lagaga qabanayaa waa khayraadka dihin ee Berbera ku duugan, maantana waxaynu gaadhnay weakhtigii wershadaynta iyo hirgelintooda.”sidaa waxa yidhi Xoghayaha Dawladda Hoos ee Degmada Berbera.
Berberanews kala soco muuqaal Video ah oo ku saabsan khudbadihii masuulliyiintu madashaas ka jeedisay.
Previous articleMadaxweyne-ku-xigeenka Somaliland oo Sheegay in Al-shabaab Soo Gashay Magaalooyinka Dalka
Next articleWiil Mucjiso ah oo booqasho ku yimi Hargeysa, una duceeyey Somaliland iyo Madaxtooyada oo qaabbishay